सडकको दुर्दशा किन भैरहेको छ निर्माणमा ढिला सुस्ती ?
You are at:Home»ब्रेकिङ न्युज»सडकको दुर्दशा किन भैरहेको छ निर्माणमा ढिला सुस्ती ?
By esinghadurbar	 July 24, 2018 No Comments
बर्तमान गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले तोकिएको समयमा निर्माण कार्य पूरा नगर्ने ठेगेदारहरुलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गरिने भनिएता पनि ठगेदारहरुको लापरबाही र तोकिएको समयमा सडक निमार्ण नहुदा चावाहील–जोरपाटी महाबौद्ध सडकखण्ड बर्षा याम सुरुवात भएदेखि पानी जमेर हिलोको कारण यात्रु तथा स्थानीयहरुले निकै सास्ती र वातावरण प्रदुषणको मार खेप्न परिरहेको छ ।
सो सडकखण्ड समयमा नै निर्माण हुने भनिएता पनि निर्माण कार्य सुरुवात भएको एक वर्ष पूरा भैसक्दा पनि निर्माण कार्य भने अझै अब्यबस्थित र अस्तब्यसत नै रहेको छ । निर्माण राम्रो र ब्यबस्थितसँग पूरा गरिएको छैन ।
आखिर किन ?के भैरहेको छ, निर्माण समिति
के गरिरहेका छन् त ? सो सडक खण्डका ठेगेदार भनौदाहरु आखिर ।
कहाँ हराइरहेको छ त निर्माण कार्यका लागी छुटियाइएको बजेट रकम किन भइरहेको छैन खोजि नीति गृह मन्त्रालयबाट किन अन्देखा गरिदै छ ?
कहिले सम्मा हो निर्माण समितिको लापरबाहि ? कहिले होला सो सडकखण्ड ब्यबस्थित ? प्रदुषण मुक्त निर्माण पूरा नभएको कारण सवारी साधन धेरैनै जाममा पर्ने गरेको पाइन्छ ।
सो कारण यात्रुहरु भनेको समयमा तोकिएको गन्तब्यसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । १० मिनेट समय लाग्ने दुरिमा पनि ३० मिनेट लाग्ने गर्दछ । पिडित यात्रुहरु भन्दछन ,हामीले सास्ति खेप्न परिहेको छ ।
वर्षा याम सुरु भएपछि सडकमा पानी जमेको र वरिपरिबाट बगेर आएक्mो फोहरमैला कुहिएको कारण र अब्यबस्थित ढलको कारण वातावरण प्रदुषण भैरहेको छ ।
तर पनि सरोकारवालाहरु बाट समाधान र चाँडो निर्माणको लागि कुनै चासो भने देखिएको छैन ।
आगामी दिनमा माहामारी जस्ता मानव बिनासकारी रोग फैलन सक्ने स्थानिय बासिन्दाको गुनासो रहेको छ ।
सो सडक खण्ड निर्माणको लागी समयमा नै बजेट पारित भएको थियो ।
निर्माण कार्य सुरुवातभएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सडक अब्यबस्थित नै रह्यो ,किन ? आखिर के छ त रह्स्य, किन छन सरोकारवालाहरु मौन गृहको अन्देखापन हो या निर्माण समितिको ठेगेदार भनौदाहरुको लाचारिपन लापरबाहीहो ।